मजदुर दिवस मनाइयो, वास्तविक मजदुरको अवस्था अझै दयनिय - Sagarmatha TV Sagarmatha TV
मजदुर दिवस मनाइयो, वास्तविक मजदुरको अवस्था अझै दयनिय
१८ बैशाख २०७९, आईतवार २०:३७
प्रिन्स मिश्र- आज मे १, नेपालभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मजदुर दिवस मनाइएको छ । सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा भएको मजदुर आन्दोलनले स्थापित गरेको मजदुर दिवस, हरेक वर्ष श्रमको सम्मानमा मनाउँदै आइएको छ । तर वर्षेनी ठुलाठुला कार्यक्रम गरी मजदुर दिवस मनाइरहँदा वास्तविक मजदुरहरुका हक र अधिकार भने अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन । अझै पनि मजदुरहरु पेशागत शोषणमा परेको गुनासो गर्छन ।
दिवसको अवसरमा नेपालमा पनि बिभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना भए । तर देशका बिभिन्न स्थानमा कार्यक्रम गरेर दिवस मनाइरहँदा वास्तविक मजदुर र उनीहरुको श्रमको चर्चा बाहेक अरु कुनै विशेष कार्यक्रम भएनन् ।
श्रमिकको श्रमको सम्मान गर्न, मजदुरको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न र स्वयंम् मजदुरलाई मजदुरका हक अधिकारबारे जागरुक र सगंठित गर्न मजदुर दिवस मनाउने गरिएको छ । तर विडम्वना वास्तविक मजदुरहरु भने यस दिवस बारे अनभिज्ञ मात्रै छैनन उनिहरु आफ्नै हक र अधिकारका बिषयमा समेत बेखबर छन् । अझै पनि नेपालका अधिकांश मजदुर आज के खाने ? कसरी बाच्ने ? र कसरी परिबार पाल्ने ? भन्ने चिन्तामा छन् ।
नेपालमा मजदुरको अवस्था गाउँघरमा मात्र होइन राजधानी काठमाडौंमै पनि दयानिय छ । यहाँ ज्याला गर्नेदेखि पेशागत श्रमिकसम्म शोषित छन् । तर विडम्बना भनौं, जुन मुद्धा लिएर राजनीतिक दलले भोट पाउथे उनीहरुले तिनै मजदुरको भावनाको सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । यस्तोमा मजदुरका बिषयमा वकालत गर्नेहरु बिस्तारै स्वार्थमुखि बनेको र मजदुरको पीडा सम्बोधन गर्ने निकाय नबनेको मजदुर नेताहरुको आरोप छ ।
आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आरामको नारासहित सन् १८८६ बाट अमेरिकाको सिकागोमा मजदुर दिवस मनाउन थालिएको थियो । तर दुखको कुरो के छ भने न त मजदुरले आठ घण्टा आराम पाउँछन् न त समयमा आफ्नै श्रमको मुल्य । उनीहरु अझै पनि रोजगारदाता र कलकारखानाबाट पीडित हुने गरेका छन् ।
यस्तोमा श्रमिकको सम्मान, समृद्धि र उत्थानका नाराहरु केवल नारामै सिमित बन्दा समेत सरोकारवाला निकाय भने मौन रहने गरेका छन् । तसर्थ अब मजदुरको हक र अधिकारका बारेमा सबै सरोकारवाला निकायले गम्भिर भएर सोच्ने बेला आएको छ ।